Malta Tourism Authority North America Ikozvino Inohwina 3 Best Awards
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Malta Kuputsa Nhau » Malta Tourism Authority North America Ikozvino Inohwina 3 Best Awards
Awards • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Malta Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
(Kubva kuL kusvika kuR: Michelle Buttigieg, Mumiriri weMalta Tourism Authority, North America naMaura Lee Byrne, Sr. Mutevedzeri weMutungamiri & Muparidzi, North Star Travel Group; Mufananidzo wechikwereti: Vitaliy Piltser)
The Malta Tourism Authority (MTA) yakanzi Best Tourism Board Europe (goridhe); Yakanyanya Kuenda Mediterranean (sirivha); uye Best Travel Agent Academy Chirongwa (sirivha) pa2021 Travvy Awards, inotambirwa neTravAlliancemedia.
Iyo 2021 Travvy Awards, ikozvino mugore rayo rechinomwe, yakakurumidza kuwana mukurumbira seAcademy Awards yeUSA indasitiri yekufambisa.
Chiitiko ichi chakaitwa neChitatu, Mbudzi 10th, muMiami Beach, Florida.
VeTravvy vanocherekedza vatengesi vepamusoro, nzvimbo dzekuenda, vanopa tekinoroji uye zvinokwezva, sekusarudzwa neavo vanovaziva zvakanyanya - vamiririri vekufambisa.
“Kutambira matatu Travvy Mipiro rukudzo rwakakura kuMalta, uye rinonyanya kukosha post denda, "akadaro Michelle Buttigieg, Mumiriri weMTA North America. Akawedzera kuti, "Tinoda zvikuru kutenda TravAlliance nerutsigiro rwavo uye vese vanoshamisa vekufambisa vanoramba vachiratidza kufarira kukuru kudzidza nezvekutengesa. Kuenda kuMalta. Izvi zvakaita kuti Malta iwedzere nekusimbisa kushambadzira kwayo uye hukama hweveruzhinji mumusika weAmerica. Ino inguva yakanaka yekutumira vatengi kuMalta nekuti yakavhurika zvakare, yakachengeteka, ine zvakawanda zvekupa, ine nhaka inonakidza yekuongororwa nekunakidzwa, mhemberero uye zvakasiyana-siyana zviitiko zveumbozha. "
Sezvo Malta Tourism Authority (MTA) yakavhurazve Representation yayo muNorth America muna 2014, kushanya kubva kumusika weUS, pre covid, zvakapetwa kana.
Carlo Micallef, Mutevedzeri weMukuru Mukuru uye Chief Marketing Officer, Malta Tourism Authority, akawedzera "MTA inotenda zvikuru kuwana, zvakare, yakagamuchira mibairo mitatu yakadai mumusika weAmerica une makwikwi anoratidza kuti vamiriri vekufambisa vakatenda uye kupa mubairo bhizinesi reMalta Tourism Authority uye. chiitiko chinoenderera kunyangwe panguva yedenda. Kushambadzira & PR chiitiko cheMTA muNorth America chakaenderera mberi chisina kukanganiswa neakasiyana siyana epamhepo zvirongwa zvakabatsira vafambisi vekufambisa kusvika pakuziva Zvitsuwa zveMaltese zvirinani vachichengeta Malta & Gozo pamusoro pepfungwa. Iyi mibairo inoratidzawo kuzvipira kweMTA pakudzidziswa kwevamiriri vekufambisa uye tinotarisira netarisiro kugamuchira vashanyi vakawanda vekuNorth America muThe Maltese Islands muna 2022 zvichienda mberi.
Zvitsuwa zvine zuva zveMalta, pakati peGungwa reMedithera, ndiko kumusha kunoshamisa kuunganidzwa kwenhaka yakavakirwa, kusanganisira iyo yakanyanya kusimba yeUNESCO World Heritage Sites mune chero nyika-nyika chero kupi. Valletta yakavakwa nevanodada Knights of St. John ndiyo imwe yeUNESCO nzvimbo uye European Capital of Culture ye 2018. Malta's patrimony mumatombo ematombo kubva kune yekare yakasununguka-yakamira matombo ekuvaka munyika, kune imwe yeBritish Empire inotyisa zvikuru. Dziviriro masisitimu, uye inosanganisira musanganiswa wakapfuma wezvivakwa zvepamba, zvechitendero uye zvechiuto kubva kunguva dzekare, dzepakati nepakati uye dzekutanga dzazvino. Nemamiriro ekunze anoyevedza ezuva, mahombekombe anoyevedza, hupenyu hwehusiku hunofadza uye makore 7,000 enhoroondo inonakidza, pane zvakawanda zvekuona nekuita. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Malta, shanya visitmalta.com.